4 akanakisa emahara emawadhi eapplication nzira dzei iphone uye ipad
Kuru Nhau & Ongororo 4 akanakisa emahara eYouTube app nzira dze iPhone ne iPad
4 akanakisa emahara eYouTube app nzira dze iPhone ne iPad
Google & apos; s YouTube sevhisi ndiyo inonyanya kuzivikanwa webhusaiti yevhidhiyo midhiya kunze uko - uko & apos; hapana mubvunzo nezvazvo. Kubva pane zvemushandisi zvemamateur-zvakagadzirwa, kune semi-pro mavhidhiyo mune yakawanda yezvikamu zvakasiyana, zvehunyanzvi clip, uye, zvechokwadi, mijenya uye akawanda emimhanzi mavhidhiyo. Wese munhu anoshandisa iyo Internet nguva dzose angangotarisa kana imwechete YouTube clip pazuva. Nomuzvarirwo, sevhisi inowanzo shandiswa pama smartphones uye mapiritsi, senge munguva yepashure-PC, vashandisi vanowanzo shandisa midhiya yakadaro pamafoni avo. Uye, ehe saizvozvo, kune epamutemo YouTube maapplication, akagadzirwa neGoogle, kune ese ari maviri Android uye iOS nhare yekushandisa masystem.
Uye usatikanganisa - iwo maapplication anotaridzika uye anoshanda kwazvo. Kunyangwe paIOS, inova mukwikwidzi akaomarara kuGoogle & apos; yavo Android, iyo YouTube app, pakati pemamwe maGoogle maapps, inoyevedza yakashongedzwa yakatsetseka. Saka nei mumwe achizoda imwe nzira, yechitatu bato maapplication, handiti?
Zvakanaka, pane akati wandei nyaya neYouTube & apos; s zviri pamutemo maapplication. Kutanga, vazhinji venyu vangave makaona kuti kudzora iyo app kunobva kwamisa chero kutamba. Izvi zvinoreva kuti haugone & ampos; teerera kumavhidhiyo emimhanzi paunenge uchiita chimwe chinhu pane yako iDevice, kana kana iyo skrini yadzimwa. Iko & apos; s chikonzero chakanakisa cheicho - YouTube & apos; s purofiti inogadzirwa neyemari yemari. Nekudaro, zvakasikwa, sevhisi inoda kuti iwe utarise kushambadza kwayo, pane kungova nazvo kumashure. Izvo zvinogona zvakare kufungidzirwa kuti Google haifarire iyo kana vashandisi vachishandisa sevhisi, nekutamba dzakasiyana siyana mimhanzi playlists, panzvimbo yevhidhiyo-inomiririra saiti. Kunyanya kana iwe uchifunga kuti Google Play Music iripo. Huye, mazhinji echitatu bato maapplication anotendera kutamba kumashure, nepo iyo app ichideredzwa kana chishandiso chakarara.
Zvino, isu hatisi kureva kuti munhu anofanirwa kuenda padanho rekubiridzira kubira YouTube yezvese mari yemari. Asi dzimwe nguva zvinotsamwisa chaizvo kana munhu achida kudzikisira chishandiso masekondi mashoma - kupindura meseji, kutarisa tsamba, kana musangano wakagadzwa. Iyo clip inomira kutamba, uye inoda kutanga futi, uye dzimwe nguva inodzokera kune yakasviba skrini uye inoda kubhadharisa zvakare. Izvo zvinongotyora chiitiko.
Chikonzero chechipiri munhu angangoda yechitatu bato YouTube app ndeye iOS 9 & apos; s nyowani nyowani mufananidzo-mu-pikicha mode. Kubva ikozvino, kutarisa clip muYouTube app kana YouTube saiti kuburikidza neSafari ichavhura mune yakasarudzika mutambi, iyo isina iyo iOS mufananidzo-mune-pikicha bhatani. Kuti uwane bhatani rakataurwa, mumwe anofanirwa kutamba vhidhiyo yeYouTube kuburikidza neyeyeyeuri iOS mutambi. Zvakanaka, zvinongoitika kuti yakawanda yechitatu bato YouTube maapplication anoishandisa.
Isu tinotanga kubva pane rondedzero neiyo yega app irimo iyo inobvumidza pikicha-mu-pikicha yePad Air Air 2. Izvo & apos; ndizvozvo - zvinosuwisa, vazhinji vechitatu bato YouTube maapps ane akazara-akazara uye akagadzirwa zvakaipa, kunyanya iwo anoshandisa iOS & apos; s mutambi ane mufananidzo-mu-pikicha bhatani. Kunze kweayo atakaedza, takawana MyTube kuve nyore kukwana kufamba, pasina kukanda yakazara-skrini maapplication kumeso kwako nguva dzese pazvinogona. Sebhonasi yekuwedzera, iwe unogona kutora dunhu rekusarudzika iro rakataurwa nevids rakabatana naro, saka kana iwe uchida kuziva izvo & apos; zvinozivikanwa mune imwe nyika yekune imwe nyika, kana kunyadziswa nevanozivikanwa vids vaunoona vachiuya kubva kune ako - unogona kuchinjanisa icho chakatenderedza .
Tube Player ine yakasarudzika-ish mashup yeYouTube uye iOS marongero. Zvinotora kanguva kuti udzidze kutenderera, asi kana munhu akamonera musoro wavo akatenderedza, iyo app inopa zvimwe zvakanaka zvinobatsira maficha. Kudhonza chigunwe kumusoro uye pasi pamusoro peiyo vhidhiyo hwindo rinodzora vhoriyamu, uku uchitsvaira kuruboshwe kana kurudyi uchasvetukira kumberi kana kumashure muvhidhiyo 10 masekondi. Iyo app inopa kumashure ekuteerera kugona, uye kugona kusarudza yako default dunhu zvakare.
NetTube isn & apos; yakanyanya kunaka kana kurongedzwa zvakanaka, asi inopa vashandisi kugona kutsvaga pane ese YouTube uye SoundCloud. Iyo app inotarisana nemimhanzi uye, zvokwadi, inopa kumashure kwekutamba. Pamusoro pezvo, pane & kurara 'kurara', iyo inomisa kutamba mushure memushandisi-seti yenguva. Zvinonzwika zvakanaka kune avo vanofarira kurara pane imwe mimhanzi yekunyaradza yekurara.
McTube ine yakasarudzika dhizaini uye zvakare inobvumidza vashandisi kuchinjisa yavo default dunhu. Mutambi waro haanyanyo fadza - hapana mabhaisikopo kana pikicha-mu-pikicha pano - asi ine zvishoma zvinobatsira maficha, sekudzokorora, kurara, uye kugona chete kutamba odhiyo - nekuda kwekuchengetedza data, tinofunga. Sezvingatarisirwa, iyo zvakare inoridza odhiyo kumashure.
Maitiro ekurodha pasi mafaira nekukurumidza pane iyo Samsung Galaxy S5
Ko foni inogona kuyera chinhambwe semutongi here?
Sei-ku: Midzi uye Vhura yako Verizon Samsung Galaxy S4
Oculus maapplication anonzi anokonzeresa kupisa, kudhiraita bhatiri pane ichangobva kuvandudzwa Galaxy smartphones
Epic naApple vadzokera mudare reUS: Is Fortnite iri kudzokera kuIOS